ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်စေလိုပါသည်”အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်စေလိုပါသည်”အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) “
ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်စေလိုပါသည်”အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) “
Posted by Mobile House on Aug 14, 2011 in Computers & Technology, Myanma News | 39 comments
ခုခေတ် နည်းပညာတိုးတက်လာတာကောင်းပါတယ် ။ဒါပေမဲ့
လူယုတ်မာတွေဟာတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာကိုအသုံး ပြုပြီး
အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တက်ဆင်ကြတယ် ။အင်တာနက် ပေါ်တင် တာတွေလဲ ကြားဖူးကြမှာပါ ။ကင်မရာတွေက လဲ သေးလာတဲအပြင် ဈေးတွေကလဲ ချိုလာပါတယ် ။အမျိုးအစားစုံ ပြည်တွင်းကိုဝင်လာပါတယ် ။ ကျွှန်တော် မြင်ဖူးတဲ့ဟာတွေကိုဓာတ်ပုံနဲ့ကြည့် ကြည့်ပါ ။ပြည်တွင်းမှာအသုံးများတဲ့ဟာတွေပါ ။အများကြီးထဲ ကသိထားဖို့ တင်ပေးလိုက်တယ် …
နာရီပုံ နဲ့ ကင်မရာ ပါ ။တခြားပုံလဲရှိပါတယ်
နေကာမျက်မှန် ကင်မရာပါ ။
ကြယ်သီးပုံနဲ့ ကင်မရာပါ ။
မီးခုလုပ် ပုံစံပါ ။
အများကြီးကျန်သေးတယ် နော် ။ပုံစံတွေ ကအများကြီးနော် ။ကောင်လေးနဲ့ကဲမယ် ဆိုလည်းပဲ သတိထားကြနော် ၊မိုးဟေကို လို နံမည် ကြီးသွားမယ်။
အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တပ်ဆင်ထားမထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တပ်ဆင်ထားမထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ အ၀တ်အထည်စတိုးဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ ပလာဇာတွေရဲ့ အ၀တ်အစားလဲခန်း (အ၀တ်အထည်အသစ်တွေကို စမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ကြည့်တဲ့အခန်း) တွေမှာ မသမာသူတွေက hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တွေ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေဟာ သေးငယ်လွန်းတာကြောင့် ဘယ်နားမှာတပ်ဆင်ထားလဲဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကတော့ မိမိမှာပါလာတဲ့ mobile phone နဲ့စမ်းသပ်တဲ့နည်းပါပဲ။ ၁။ အ၀တ်လဲခန်းထဲကိုမ၀င်မီ မိမိဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု လုပ်လို့ရမရ စစ်ဆေးထားပါ။ ၂။ အ၀တ်လဲခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ mobile phone ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။ ၃။ ဖုန်းခေါ်လို့မရဘူးဆိုရင် အဲဒီအ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera ရှိနေဖို့များသွားပါပြီ။ ဖုန်းခေါ်မရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ hidden camera ရဲ့ ဖိုင်ဘာကေဘယ်က mobile phone လိုင်းကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလို့ပါပဲ။ နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) နဲ့ ရိုးရိုးကြေးမုံမှန်ကို ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ ဟိုတယ်တွေရဲ့ သန့်စင်ခန်းတွေ၊ စတိုးဆိုင်ကြီးတွေက အ၀တ်အစားလဲခန်းတွေ၊ ဟိုတယ်အိပ်ခန်းတွေ မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ မှန်တွေဟာ တကယ့်ကြေးမုံပြင်စစ်စစ်တွေလား၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) တွေလား ဆိုတာ သင် သံသယ၀င်ဖူးပါသလား? Two way mirror ဆိုတာကတော့ သင့်ဘက်ကကြည့်ရင် ကြေးမုံပြင်အနေနဲ့ သင့်ပုံရိပ်ကို သင်ပြန်မြင်နေရပေမယ့် အခြားတစ်ဘက်က ကြည့်ရင် သင်လုပ်သမျှကို တစ်ဘက်လူက အကုန်မြင်နေရမှာပါ။ ဟောလိဝုဒ် စုံထောက်ကားတွေမှာ တရားခံကို စစ်မေးတဲ့အခန်းထဲမှာ သုံးတဲ့မှန်မျိုးပေါ့။ အပေါ်ယံကြည့်ရုံနဲ့တော့ ကြေးမုံအစစ်လား၊ နှစ်ဘက်မြင်မှန်လားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ အင်မတန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဘက်မြင်မှန်တွေကို သိနိုင်တဲ့ လွယ်ကူရိုးရှင်းသော စမ်းသပ်နည်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ၁။ သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကို မှန်ရဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ ထိထားလိုက်ပါ။ ၂။ သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်က လက်သည်းခွံနဲ့ မှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ သင့်လက်ချောင်းလက်သည်းခွံကြားမှာ အနည်းငယ်ကွာဟနေတယ်ဆိုရင်၊ ဒါဟာ သာမန် ကြေးမုံပြင်ပါ။ ၃။ သင့်ရဲ့လက်ချောင်းလက်သည်းခွံနဲ့ မှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ လက်ချောင်းလက်သည်းခွံ နှစ်ခုဟာ တိုက်ရိုက်ထိစပ်နေသလိုဖြစ်နေတယ်၊ ကြားထဲမှာ အကွာအဝေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့၊ ဒါဟာ နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) ပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ သာမန်ကြေးမုံပြင်တွေမှာ မှန်ရဲ့ တစ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကို ပြဒါးသုတ်လိမ်းထားပြီး မှန်ကြည့်သူဘက်က မျက်နှာပြင်မှာတော့ ပြဒါးသုတ်လိမ်းထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်လက်ချောင်းထိပ်နဲ့ မှန်ထဲကပုံရိပ်ရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်ကြားမှာ မှန်တစ်ချပ်စာ ကွာခြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်မြင်မှန်မှာတော့ ပြဒါးကို မှန်ကြည့်သူဘက်က မျက်နှာပြင်မှာ သုတ်လိမ်းထားတာမို့ သင့်လက်ချောင်းနဲ့ မှန်ထဲကလက်ချောင်းကြားမှာ ကွာဟမှုမရှိတော့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မှန်ရှေ့ရောက်ရင် မှန်မျက်နှာပြင်ကို လက်သည်းထိပ်လေးနဲ့ ထိကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။အကောင်ဆုံးက မီးပိတ်လိုရရင်မီးပိတ်ပါ။ ဒီစာလေးကို သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေဆီကို forward လုပ်ပေးပါ။ ဒီစာလေးကိုမျှဝေခြင်းအားဖြင့် အမျိုးကောင်းသမီးများစွာရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာကို ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
blackprince72 ရေ အလွန်ဘဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှိမရှိဘယ်လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာ ခုမှဘဲသိရပါတယ်…ထပ်ဆင့်နီးစပ်ရာပြောပြပေးပါ့မယ်။။
ဒီလို အကျိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးတွတင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတ အများကြီးရပါတယ်။
၂ဘက်မြင်မှန်က မျက်စိကို အနားကပ်ပြီးသေသေချာချာကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
သိသင့် ရှောင်သင့်တာတွေ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ
သိလျက်နဲ့ မလိုက်နာမိကြမှာပဲ စိုးတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဟူရာမင်းသားလေးရေ။ ခုလို လက်တွေ့စစ်ဆေးနည်းတွေပါပေးထားတော့ ရှောင်ရှားနိုင်တာပေ့ါ။
ကျေးဇူးပါ black prince ရေ။ခုလို ခေတ်မှီ ပစ္စည်းတွေကို တကယ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးချသင့်တာပါ။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ တိုက်ခိုက်ဖို့ အတွက်တလွဲ သုံးနေကြတာတော့ စိတ်ကုန်စရာကြီးနော်။ဒီ အထောက် အကူပစ္စည်းတွေနဲ့အကျင့်ပျက်ခြစားနေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုရော လူကြီးဆိုသူများကို ပညာပေးသင့်ပါတယ်
နှစ်ဘက် မှန်တွေ ကို
မူဗီ တွေ ထဲ မှာ မြင်ဖူးလို့ 
အခုလို ဘလက်ပရင့်စ် တင်ပေးလိုက်တော့
အင်း…ကိုယ် တို့ တွေ ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးက လုံခြုံမှု ကို မရှိတော့တာပါလား။ လုံခြုံရေး အတွက် ထွင်ထားတာတွေက လူတွေ ကို မလုံမလဲ ဖြစ်အောင် ၊ အရှက် လုံခြုမှု မရှိအောင်လည်း တ တ်နိုင်တာပဲ..
သတိပေးတာ သိပ်ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ။
အဝတ်လဲခန်းတွေ အကြောင်း အမျိုးသမီးတွေ သိထားသင့်ပါတယ်…. အမျိုးသားအများစု ကတော့ သိကြ
ပါတယ်…. MP4တွေနဲ့ အင်တာနက်တွေက တစ်ဆင့်ပေါ့ဗျာ…. ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှု အတိုင်းအတာ
blackprince72 ရေ ကျေးဇူးပါဗျို့…. ခုမှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရပေတော့တယ်။
Good post and thanksalot for that. If possible, let me know about hidden microphone. Hidden microphone is using by thief for watching out that the people are absecent at home.
အများအတွက် လုံခြုံရေးအကျိုးပြုပို့စ် ကိုတင်ပေးတာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
အင်တာနက်ဂျာနယ်မှာ တခါတခါပစ္စည်းအဆန်းလေးတွေ ကြော်ငြာတယ်
two way mirrorတော့သိတယ်
ခုတော့ ဘာက two way mirrorလဲဆိုတာ သိသွားပါပြီ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် side affect ဆိုတာ နေရတိုင်းမှာရှိပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ.. ကျွန်တော်ကူးသွားပီ ပို့ပေးလိုက်ပါဦးမယ်
မီးခြစ်ကင်မရာ၊ဆေးလိပ်ဘူး၊မီးအိမ်၊အင်းကျီချိပ်၊ဘိုလည်ပတ်ကလစ် တွေရှိသေးတယ်။မီးခြစ်၊ဆေးလိပ်ဘူး တွေဆိုတကယ်သုံးလိုလဲရတယ်။ဈေးမရှိဘူး။သော့၊ဘောပင်-၂၅၀၀၀ လောက်။မျက်မှန်၊နာရီ-၇၀၀၀၀ လောက်။ဒီဝန်းမှာပဲရှိတော့ဝယ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်
ကျေးဇူးပဲဗျို့… Shared ဖို့အတွက် ကော်ပီ ကူးသွားပြီနော်….
စပိုင် ကင်မရာလေးတွေ ဘယ်မှာ ၀ယ်လို့ရလဲ သိလျှင် … သတင်းပေးပါဦး … သူများကို ချောင်းဖို့ တော့ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး .. တစ်ခါတစ်လေ …သတင်းထူးလေးတွေအတွက် လျှပ်တပြတ်ရိုက်ချက် လုပ်ချင်လို့ပါနော် ဟဲဟဲ
ရှိပါတယ် ။ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်လို့ ရပါတယ် ။တရုတ် မှာလောက်တော့ မ စုံဘူးပေါ့ ။
ဘောပင်ဗီဒီယိုကင်မရာလေး.. ရွာသားတွေကို မဲဖောက်ပေးဖို့ ၀ယ်ထားသေးတယ်..။
အခုစာတွေကြည့်ပြီး.. ပိုလန့်လာတာနဲ့.. သိမ်းထားလိုက်တော့မယ်..။
ကျွန်တော်က အမြဲကံကောင်းတဲ့သူဗျ …
တစ်ယောက်တည်း အပြေးပြိုင်ရင်တောင် ဒုတိယပဲ ရလောက်အောင်ကို ကံကောင်းတာဗျ …
(အင်းးးးးးး အလိမ်ခံရလွန်းလို့ မယုံတတ်ဘူး။ သဂျီးအမျိုးတွေပဲ မဲပေါက်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။)
(ရွာသားတွေကို မဲပေါက်တယ်ဆိုပြီး ပေးရင်လည်း သုံးမရတဲ့ အိမ်က ကလေးဆော့ပြီး ပျက်နေတာကို ညာတာပါတေးနဲ့ ပေးလိမ့်မယ်။)
(အစောကြီးတတည်းက ထင်သားပဲ။ တနည်းနည်းနဲ့ ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့။)
မမ က အမှန်တွေ သိပ်ပြောတာပဲ
သူကြီးအကြောင်း ကျမ်းပြုစုရင်တောင် ရလောက်မယ် …
ဖြန့်ပေး ကြပါ ။မိန်းကလေး တွေ ဖို့ အရေးကြီး ပါတယ် ။ တော်တော် ခေတ်စားနေတယ် ။
အေးဗျ၊ မြင်ရတာ အံ့မခန်းရှိလှတယ်။ ကျနော်ကတော့ အစအဆုံး တထိုင်ထဲကြည့်။ ပြီးရင်လည်း စားမြုံ့ပြန်တွေးကြည့် အရသာတယ်ရှိတာပဲ။ (လူကြီးမင်း၏ပို့စ်နဲ့ ရွာသားများရဲ့ ကွန်းမန့်အရေးအသားများကို ပြောပါသည်)
ကိုကြောင် ကြီး ရေ ဘာဆိုလိုလဲ ။နားမလည် လို့ ပါ။
() ပါသွားလို့ပဲ … အဲဒါသာ မပါရင် ကျွန်တော်ထင်တာ မှန်သဗျ …
သတိထားသင့်တာတွေပဲ။ မသိလို့။ အဲဒီ syp camera တွေက resolution ကောကောင်းရဲ့လား။ ဆောင်တော့ဆောင်ထားချင်သား။ clean government သမားတွေအတွက်။
resolution က ကောင်း ပါတယ်။ ၀ယ် ရင်တခါတည်းစမ်း ကြည့် ပါ ။မကောင်း တာပါ တက်တယ် ။
ကား ကီး ချိန်း ကင်မရာ က တော့ ၃နာရီ လောက် ဗီဒီယို ရိုက် လို့ ရတယ် ။photo ဆို တော်တော် ရတယ် ။
precious to let us know but need to take care in practical for ladies!!!!!
ဖုန်းမရှိတဲ့ သူတွေကျတော့ ဘယ်လို စမ်းသပ်မလဲ….တစ်ခြားနည်းလေးရှိရင်လည်း ပြောပြပါဦး…
အကောင်းဆုံးကတော့ ၀ယ်ပြီးအဆင်မပြေရင်ပြန်လဲပေးတဲ့ ဆိုင်မှာဝယ်ပြီး အိမ်မှာပဲလဲပါ။